Wararka Maanta: Khamiis, Aug 2 , 2012-Dastuurka KMG Soomaaliya oo Mamnuucay Gudniinka Fircooniga ah ee Haweenka iyo Aragtiyo kala duwan oo laga bixiyay
Gudniinka fircooniga ah ayaa si weyn looga isticmaalaa Soomaaliya, iyadoo aan la ogeyn sida uu uga hirgeli karo Soomaaliya, maadaama ay ay dadka Soomaaliyeed u arkaan inay muhiim tahay in haweenka la gudo.
Sidoo kale, dastuurka ayaa wuxuu ogolaayaa in caruurta Soomaaliyeed inta ay ka gaarayaan 15-sano ay helaan waxbarasho lacag la'aan ah, qodobbada sida weyn looga hadlay ee dastuurka ku jira ayaa waxaa ka mid ah, in qofku uu ku qaan-gaari karo 18-sano taasoo ay aad uga biyol diidan yihiin culummada Soomaaliyeed.
Dasturka ayaa waxaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay aqoonyahanno, culummo iyo dadweyne kala duwan, waxayna qaarkood ku tilmaameen mid aan u qalmin dalka halka kuwo kalena ay ku tilmaameen inuu yahay mid Soomaaliya u horseedaya nabad iyo horumar.
Guddoomiyaha Majmaca culummada Soomaaliyeed, Sheekh Axmed Cabdi Dhicisoow ayaa ku tilmaamay dastuurka mid aan ka tarjumayn diinta islaamka, isagoo xusay in diyaarintiisa ay gacanta ku hayeen dad aan islaam.
Madaxda Soomaalida ayaa sheegay in dastuurka uu yahay mid wanaagsan oo looga baxayo xilliga KMG ah, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlayay xirtaankii shirka ansixinta dastuurka uu sheegay in xubno beesha caalamka ka socda ay u sheegeen in dastuurkan uu ka mid yahay 25-ka dastuur ee dunida ugu horreeya.
Dhanka kale, dastuurka waxaa soo dhaweeyay maamullada dalka ka jira oo dhan sida Puntland iyo Somaliland, balse waxaa diiday oo kasoo horjeestay Xarakada Al-shabaab oo ku tilmaamay dastuur ka horimaanaya diinta Islaamka.